Weriye Cawil Daahir oo Muqdisho lagu dilay, Maxaad ku Xasuusan doontaan? Taariikhdiisii oo kooban | Baligubadlemedia.com
Weriye Cawil Daahir oo Muqdisho lagu dilay, Maxaad ku Xasuusan doontaan? Taariikhdiisii oo kooban
Weriye Cawil Daahir Salaad oo ka tirsanaa Telefishinka Universal, ayaa ku dhintay qaraxyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen qaar ka tirsan shaqaalaha Universal TV ee Muqdisho, laba Qof oo ka tirsanaa ilaaladiisa iyo Darawalkisii, ayaa la dhintay Weriyaha.
Labo Qarax oo gaadhi loo adeegsaday, ayaa saakay ka dhacay magaalada Muqidisho. Kan hore ayaa ka dhacay illinka Tiyaatarka Qaranka. Ugu yaraan 20 qof oo u badan Askarta dowladda, ayaa ku dhimatay qaraxii koowaad oo ka dhacay bar koontarool oo ku hortaalla Tiyaatarka Qaranka, waxaanay u badnaayeen ilaalada Guddoomiye ku-xigeenka Amniga ee maamulka gobolka Banaadir Maxamad Tuulax oo marayay meesha uu qaraxu ka dhacay. Dhaawacyada ay Aamin Ambulance qaadday ayaa la sheegay inay gaadhayaan 14.
Qaraxa labaad, ayaa qiyaastii muddo soddon daqiiqo ah ka dib ka dhacay taallada Daljirka Daahsoon. Illaa hadda lama oga khasaaraha ka dhashay. Ururka Al-shabaab, ayaa sheegtay masuuliyadda qaraxyadaas. Dowladda Soomaaliya, ayaa iyaduna sheegtay inay qabatay oo uu xidhan yahay qofkii hagayey qaraxyadaas.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayaa tacsi u diray Ehelada Dadka ku dhintay Qaraxyadaas, waxaanu u u duceeyey inta ku dhaawacantay in Allaah caafimaad siiyo, isaga oo sheegay inaanay ka joojinayn qaraxyadu higsiga iyo dhismaha dawladnimo ee Maamulkiisa.
Weriye Cawil Daahir Salaad iyo Dadka la dhintay Allaah ha u naxariistee, ayaa lagu aamay maanta magaalada Muqdisho. Haddaba, waxaynu milicsan doonnaa Marxuum Cawil Daahir Salaad iyo doorkiisii Saxaafadda Soomaalida, shaqsiyaddiisa iyo taariikhda uu Warbaahinta ku lahaa.
AASKA WERIYE CAWIL DAAHIR SALAAD DECEMBER 22 2018.jpg
Dabayaaqadii siddeetanmeeyadii, ayuu Weriye Cawil Daahir Salaad ka shaqeynayay Raadiyaha dowladda ee Radio Muqdisho oo ahaa halka Raadiye ee dalka jiray. Markii uu dalka burburka galay wuxuu Weriyaha ka mid ahaa dhalinyaradii isku dayay dib u soo nooleynta Warbaahinta.
Wuxuu soo saari jiray mid ka mid ah Wargeysyadii tirada yaraa ee gacanta lagu daabici jiray ee Muqdisho ka soo bixi jiray, sida uu ku warramay Weriye Aadan Salamiin oo ay ka wada shaqayn jireen Universal TV, balse hadda BBC-da ka hawlgala, aqoon fiicanna u lahaa Weriye Cawil Daahir.
Sannadkii 2000 ayuu Cawil ku biiray idaacaddii iyo Telefishinkii Horn Afrik oo ahayd warbaahintii ugu horreysay ee madax-bannaan ee dalka ka hirgasha. Wuxuu sidoo kale qori jiray sheekooyinka gaagaaban oo xiiso lahaa. Wuxuu Weriyuhu caan ku ahaa Barnaamijka Dood-wadaag oo lagaga hadli jiray arrimha bulshada iyo xaaladaha hadba taagan.
Xaaladda magaalada Muqdisho markii ay xumaatay, badhtamihii sannadkii 2005 ayuu Weriye Cawil dalka ka cararay, isagoo u guuray qurbaha, gaar ahaan wuxuu degganaa magaalada London ee waddanka Britain, halkaas oo uu mihnaddiisa ka sii watay. Ka dib waxa uu ku biiray Telefishinka Universal oo uu Barnaamijkiisii Dood-wadaag ka sii watay.
Weriye Cawil dhawrkii sano ee la soo dhaafay wuxuu ku sugnaa magaalada Muqdisho oo uu u soo wareegay, wuxuuna aaminsanaa in xaaladda dalka ay soo hagaageyso. Balse amarka Illaahay maanta ayey tiisii noqotay oo gacan ka xaqdari ku dishay Qaraxyada Muqdisho ka dhacay maanta oo ay taariikhdu ahayd 22/12/2018-ka.
Weriyaha BBC-da Faarax Lammaane oo ay marxuumka in muddo ah isla soo shaqeeyeen ayaa sheegay inuu ahaa Qof wanaagsan, dabeecad iyo dad la dhaqan fiicanna leh isla markaana shaqadiisana ka adag.
Weriye Cawil Daahir Salaad oo da`diisa lagu qiyaasay 45-sano jir, ayaa ka tegay xaasas iyo carruur, sida ay Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda BBC u xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehelladii Marxuumka.
dhamaan hawlwadeenadda iyi bahda shabakadda caalamiga ah ee Baligubadlemedia waxay tacsi u dirayaan wariye cawil qoyskii qaraabadii iyo bahda saxaafadda ee uu ka baxay